Ny Samsung Galaxy S6 dia miorim-paka amin'ny andro voalohany | Androidsis
Izy ireo dia efa nahavita namaka ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge
Alfonso ny voankazo | | android-root, Samsung
Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge dia antenaina hihazo ny tsena amin'ny 10 aprily. Ilay mpanamboatra Koreana nametraka ny hena rehetra amin'ny nendasina hamelomana indray ny varotra ny fizarana finday ary, raha mieritreritra ny hividy ny sainam-baovao ianao, dia mitondra vaovao tsara izahay: ny Samsung Galaxy S6 dia hiorim-paka amin'ny andro voalohany.
Ary, na dia mbola tsy amidy aza ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge, ny mpanamboatra Koreana dia efa mandefa ny singa voalohany amin'ireo mpandinika sy mpamorona ao amin'ity sehatra ity. Ary ny zazalahin'i Chainfire dia nahavita namongotra Samsung Galaxy S6.
Ny Samsung Galaxy S6 dia hanana fidirana Root hatramin'ny andro voalohany
Tadidio fa misy fetrany io fidirana amin'ny faka io. Hatramin'ny Chainfire dia nanazava izy ireo fa tena azo inoana izany ny serivisy fandoavam-bola tantanana amin'ny alàlan'ny KNOX sy Samsung Pay dia tsy tohanana, ankoatry ny zava-misy fa tsy fantatra na ho very antoka ny fiantohana ny terminal.
Na dia heveriko aza fa ny tombony azo amin'ny fananana ny Samsung Galaxy S6 dia mihoatra lavitra noho ny fahaverezana ity endri-javatra ity. Ankoatr'izay, rehefa fantatsika fa any Espana dia kely no afaka manararaotra mandra-pahatongan'ny orinasa manavao ny haitao misy azy ireo. Ary tadidio fa Ao amin'ny Vondrona eropeana, raha ny tokony ho izy dia tsy ho very ny fiantohana amin'ny alàlan'ny fanonganana ny terminal.
Mba hialana amin'ny Samsung Galaxy S6 dia nampiasain'ireo tovolahy avy ao Chainfire CF Auto Root, ny fampiharana noforonin'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Mba hahatratrarana an'io zava-bita io dia tsy voatery nanova zavatra be dia be izy ireo, ka zara raha nanohina ny script CFAR izy ireo hahazoana ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa super amin'ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge.
Ireo maodely naorin'i Chainfire dia ny kinova an'ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge izay ho tonga amidy amin'ny alàlan'ny T-Mobile. Tokony hotadidintsika fa tsy maintsy miandry isika raha hiasa miaraka amin'ireo kinova hafa ny fizotrany, ao anatin'izany ireo tonga any Espana.
Vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa te hahazo Galaxy S6 na S6 Edge hatramin'ny andro voalohany dia afaka manamboatra tanteraka ny terminal misy azy ireo izy ireo. Tsara ho an'ny Chainfire!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Izy ireo dia efa nahavita namaka ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge
Fampitahana ny sary nalaina tamin'ny Samsung Galaxy S6 Edge sy ny iPhone 6 Plus
Ny Sony Xperia Z4 dia azo aseho amin'ny volana septambra